Steam Deck, Ihe njikwa nke Valve ka ya na ndị Gbanye | Site na Linux
Steam Deck, Ihe njikwa nke Valve iji merie Gbanye
N'oge na-adịbeghị anya valvụ weputara nkowa nke "Steam Deck" nke achọrọ dị ka ihe njikwa egwuregwu maka egwuregwu Valve (Steam) na ekwuru na ebumnuche ya ịmalite n'afọ a.
Ma ọ bụ na mgbe nnukwu ndị ọzọ na-elekwasị anya na ọrụ nke obere consoles maka PC nke nabatara ọdịdị nke Nintendo Switch ma gbaa ọsọ n'okpuru Windows, Valve arụsi ọrụ ike na ọrụ nke aka ya ma ugbu a ọ bụ eziokwu.
Nke njirimara na-eme ka Steam Deck:
Nhazi AMD Zen 2 omenala APU + RDNA 2 (8 CU) eserese eserese
Zen 2 elekere: 2.4 ka 3.5 GHz
Oge ọsọ RDNA 2: 1000 ruo 1600 MHz
4 ruo 15 W TDP
Nchekwa 16 GB nke Ram LPDDR5 5500 MT / s
Ụlọ nkwakọba ihe data 1) 64GB eMMC
Ihuenyo 7 ″ 1280 × 800 pixel LCD, 16:10, 60 Hz, nits 400 nits
Mgbapu kaadị nkwado Ee, microSD UHS-M (microSD, microSDHC, microSDXC)
Nkwurịta okwu Ikuku WiFi 6, Bluetooth 5.0
Agbakwunyere na ọdụ ụgbọ mmiri USB Type-C (DisplayPort 1.4 Dabara, kacha 8K @ 60Hz ma ọ bụ 4K @ 120Hz), USB 3.2 Gen.2
Batrị 40 Wh, kpọọ oge: 2 ruo 8 awa
Chaja tinyere eriri USB C: ngwa ngwa na-eji ikike nke 45 W
Akụkụ X x 298 117 49 mm
Ibu ibu 669 grams
System SteamOS 3.0 (Linux dabeere)
Maka akụkụ nke ngwaike anyị nwere ike ịhụ na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ, ebe ọ bụ na ọ dabeere na usoro AMD APU na-abụghị ọkọlọtọ, onye nkọwa ya yiri nke Van Gogh usoro, ya bụ, ndị nrụpụta akwadoro maka obere ngwaọrụ dị adị elekere mgbatị bụ 2.4 GHz na ohere nke ịbawanye na ọnọdụ Turbo ruo ihe karịrị 3.5 GHz, na mgbakwunye na ikwe nkwa ruo awa 8 nke nnwere onwe (njirimara nke m na-enwe obi abụọ na enwere m obi abụọ na batrị ahụ nwere ike ịdịru ọtụtụ awa, belụsọ na igwu egwu na ihuenyo ahụ ...)
Na usoro nke njikọ oche uzuoku Ọ nwere ọdụ ụgbọ USB-C 3.2, ọdụ ụgbọ mmiri 3.5 jack, mgbe na usoro nke interface, na mgbakwunye na ihuenyo, enwere abụọ touchpads (n'aka ekpe na aka nri), abụọ analog osisi, a directional cross, anọ mkpọchi na n'ihu panel, ma a Oku Steam na ngwa ngwa d-pad, bọtịnụ anọ na nsọtụ na bọtịnụ anọ na azụ na gyro axis isii.
Aesthetically, console yiri nnọọ ka ịgbanweeỌ bụ ezie na nhazi nke analog, d-pad, na bọtịnụ ihe eji eme ihe dịtụ iche, yabụ itinye osisi analog dị mma. Ha na-adịkarị n'elu ma ọ bụ n'okpuru ogwe aka na bọtịnụ n'ihu, ma Valve na-etinye osisi analog n'akụkụ ha, n'akụkụ ihuenyo ahụ.
Akụkụ ọzọ nke Steam Deck bụ dị ka Nintendo Switch, nwere nkwado maka isi nke ga-ejikọ ngwaọrụ na telivishọn (zụrụ iche iche).
Maka sọftụwia ahụ, E kwuru na sistemụ arụmọrụ nke ga-agbanye Steam Deck ga-abụ SteamOS 3.0 (dabere na Arch Linux) na interface: KDE, nke pụtara na ọtụtụ egwuregwu Steam kwesịrị ịrụ ọrụ na Proton (otu oyi akwa n'elu Wine iji mee ka egwuregwu ahụ kwekọọ na Linux).
Ọzọkwa, Valve kwuru na Ajụjụ ha na ha na BattlEye na EAC na-arụ ọrụ iji na-agba ọsọ ngwanrọ aghụghọ, nke bụ isiokwu a na-ahụkarị maka egwuregwu Windows na Linux.
Ebe igwe bụ obere PC, onye oru nwere ike iwunye ihe obula o choro (ọbụlagodi Windows). Ngwa iwu onye nrụpụta nọ na mmepe ma kwesịrị ịdị maka nnweta n'oge adịghị anya.
The console ga-abụ dị na ọtụtụ ọdịiche ebe naanị ebe nchekwa na-agbanwe, ọnụahịa mmalite nke Steam Deck bụ $ 400 na 64GB nke nchekwa n'ime, mgbe ihe nlereanya ọzọ ga-efu $ 530, ma jiri 256GB na SSD na ụdị kachasị ọhụrụ ga-efu $ 650 na ọ ga-abịa na 512GB SDD esịtidem nchekwa na mgbochi reflective etched iko. Ekwesiri ighota ya na uzo Steam nke obula nwere oghere microSD maka nchekwa ozo.
Usoro ndị a ga-amalite ibupu December a na North America na Europe.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na i nwere mmasị inwe ike ịmatakwu banyere ya banyere Steam Deck, ị nwere ike ịkpọtụrụ nkọwa dị na esonụ njikọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Egwuregwu » Steam Deck, Ihe njikwa nke Valve iji merie Gbanye
Edebere nke m, enwere m olileanya na ọ bụ ihe ịga nke ọma ọ bụghị naanị n'ihi na ọ ga-abụ nkwado dị egwu maka Linux mana n'ihi na Valve kwesịrị ya!
Chema Gomez dijo
Iji mee asọmpi na mgba ọkụ ha chọrọ karịa ike efu. Ihe ha agaghi enwe: egwuregwu Nintendo.
Zaghachi Chema Gómez
Oge a na-eme ihe, smartwatch Pine64 na-enweghị mmiri
Họrọ ikike: Nweta ntanetị maka ịhọrọ ikike ikikere CC ziri ezi